Faroole oo Garowe soo gaaray, iyo bannaanbax lagu soo dhawaynayo doorashada madaxwaynenimo ee Moqdisho ka dhacaysa. – Radio Daljir
Seteembar 10, 2012 1:35 g 0
Moqdisho, Sept 10 – Wafti uu hoggaaminayo madaxwaynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud ‘Faroole’ ayaa maantay soo gaaray magaalada Garowe.
Garoonka Garowe internetional Airport ayaa waxaa kusoo dhaweeyay wafti uu hoggaaminayo M/kuxiggeenka Puntland General C/samad Cali Shire, waxaana la filayaa in doorashada madaxawaynaha Soomaaliya kaddib in dawladda Puntland ay soo saari-doonto qoraal ku saabsan ra’yiga Puntland ee ku aadan hoggaanka loo doortay Soomaaliya.
Dhinaca kale, magaalada Garowe maantay waxaa ka dhacay bannaanbax ay soo qaban-qaabiyeen qaybaha bulshada ku dhaqan Garowe, waxaana dadku ku baaqayeen kalmado ay ka mid-tahay “Waan soo dhawaynaynaa doorashada Soomaaliya, Allaw hoggaan Soomaaliya uga dhig nin daacad ah oo dadka iyo dalkaba wax-tara”.
Socdaalka uu Garowe ku yimid madaxwayne Faroole ayaa kusoo beegmaysa xilli Moqdisho ay maantay ka socoto doorashada madaxwaynaha Soomaaliya, taasi oo la filayo in caawa ay soo gaba-gabowdo.
” Wax maamula oo ka jira Balad-weyne ma jiro” Gudoomiyaha Balad-weyne Sh Ismaacil Barre Maxamuud.